Horudhac: Manchester City vs West Ham United… (Miyuu ciyaari doonaa Sergio Aguero?) – Gool FM
(Manchester) 27 Feb 2021. Waxaa galabta lagu balansan yahay kulan ka tirsan horyaalka English Premier League kaasoo dhex mari doona kooxaha Manchester City iyo West Ham United.
Waa ciyaarta ugu soo horreysa kulammada horyaalka Ingiriiska toddobaadkan, waxaana Man City oo xilli qurux badan ku xarragooneysa ay wajihi doontaa Hammers oo iyaduna dardar xoooggan ku socota.
Saacadda ay ciyaarta billaabaneyso: 3:30 Galabnimo xilliga geeska Afrika.
Gooldhaliyaha ugu sarreeya taariikhda Manchester City ee Sergio Aguero ayaa la filayaa galabta inuu ciyaaro kulankiisii ugu horreeyay tan iyo 3-dii Jannaayo, waxaana uu kulankan u noqon doonaa midkii lixaad ee uu fasalkan ka ciyaaro horyaalka.
Difaaca reer Netherlands ee Nathan Ake ayaa ah xiddiga kale ee dhaawac ciyaartan kaga maqan kooxda Man City.
Ryan Fredericks oo difaaca ka ciyaara ayaa shaki weyn laga gelinayaa inuu u ciyaari karo naadiga West Ham isagoo qaba dhaawac dhanka gumaarka ah.
Andriy Yarmolenko, Angelo Ogbonna iyo Arthur Masuaku ayaa dhammaantood seegaya kulankan oo aan kasoo muuqan doonin safka Hammers.
West Ham United waa guul la’aan 11-kii kulan ee ugu dambeysay oo ay wajahaday Manchester City dhammaan tartammada, waxaana guul ay ka gaaraan City ugu dambeysay ciyaar ka tirsaneyd horyaalka oo ay Etihad uga soo adkaadeen 1-2 bishii September ee sanadkii 2015.
Kulankii wajigii hore ee xilli ciyaareedkan horyaalka Premier League oo ku dhammaaday barbarro 1-1 ah ayaa soo af jaray sagaal guul oo xiriir ah oo ay Man City ka gaareysay Hammers.
Manchester City ayaa 19-kii kulan ee ugu dambeysay horyaalka iyo tartammada gudaha gool ka dhalineysay West Ham.
Manchester City ayaa ku naallooneysa guulo xiriiriskii ugu dheeraa taariikhda oo ay sameeyaan kooxaha Ingiriiska, waxaana 13 ka mid ah 19-ka guul ee xiriirka ah ay ka tirsan yihiin horyaalka Premier League.
Man City waa guuldarro la’aan 26-kii kulan ee ugu dambeeyay dhammaan tartammada, waxay guuleysteen 23 ka mid ah iyagoo barbarro galay saddexda kale, waxaana ay laba guul u jiraan inay barbarreeyaan guuldarro la’aantoodii ugu dheerreyd dhammaan tartammada inta ay ka hoos ciyaaraan Pep Guardiola kaasoo la sameeyay sanadkii 2017.
Shabaq ilaaliskooda gaaray 15 kulan waa midkii ugu dheeraa horyaalka Ingiriiska ay koox sameyso marka la ciyaaro 25 kulan tan iyo xilli ciyaareedkii 2008-09.
Goolka qura ee shabaqooda la taabsiiyay 11-kii kulan ee ugu dambeysay oo ay garoonkeeda ku ciyaartay tartan rasmi ah waxa uu ahaa gool uu iska dhaliyay difaacooda Ruben Dias ciyaar ay West Brom la galeen barbarro 1-1.
Ilkay Gundogan ayaa dhaliyay sagaal gool oo horyaalka Premier League ah sanadkan 2021, waxaana uu xiddiga kusoo xiga uu ka sarreeyaa afar gool.
Raheem Sterling ayaa ku lug yeeshay 14 gool 15 kulan oo uu West Ham kaga hor tagay Premier League, isagoo dhaliyay siddeed gool, lix kalena caawiye ka noqday.